ကလေးဆန်တဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ ဆက်ဆံဖို့ နည်းလမ်း (၉)ချက် - Lifestyle Myanmar
ကလေးဆန်လွန်းပြီး မရင့်ကျက်တဲ့သူတစ်ယောက်က လက်တွဲဖော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ သင်ဟာ ကလေးဆန်တဲ့ လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်နဲ့ ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုရင် ဒီအချက် (၉)ချက်က သင့်ကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လိုပြုမှုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာ လူကြီးတစ်ယောက်ကို သင်ပေးရတာထက် သင့်မှာ ပိုကောင်းတဲ့အချက်တွေ ရှိပါတယ်။
၁။ သူတို့ရဲ့ကလေးဘဝကို ကြည့်ပါ
သင့်လက်တွဲဖော်ကို ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းက သိခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ မသိခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ကြီးပြင်းလာမှုနဲ့ သူတို့မိသားစုရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး သဲလွန်စတွေ ရှာကြည့်ပါ။ သူတို့မှာ ခက်ခဲတဲ့ ကလေးဘဝ ရှိခဲ့သလား? သူတို့အမေက စိုးရိမ်တတ်ပြီး အလွန်အမင်းကာကွယ်ပေးနေတတ်လား? မိဘတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးက အရမ်းတွယ်တာပုံရသလား? သူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ အပြုအမှုအတွက် ဆင်ခြေမပေးနိုင်ပေမဲ့ လက်တွဲဖော်နဲ့ သူတို့ရဲ့ငယ်ဘဝ၊ မိသားစုဘဝကို နားလည်ခြင်းက သူတို့ရဲ့ ကလေးဆန်တဲ့ စိတ်သဘောထားလေးတွေကို ပိုသနားစာနာစိတ်နဲ့ ဆက်ဆံပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ သင့်လက်တွဲဖော်ကို လူကြီးတစ်ယောက်လို စကားပြောပေးပါ
ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ စကားပြောပုံက ကိုယ်ပြောတဲ့စကားလိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးဆန်တဲ့ ပါတနာတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောရာမှာ ထောင်ချောက်ထဲကို ကျဖို့ လွယ်ပါတယ်။ အငြင်းအခုံဖြစ်ချိန်မှာ သူတို့ကို ဝေဖန်တာ၊ ဆူပူတာမျိုး (သို့) ရိုင်းစိုင်းစွာ ပြောဆိုတာမျိုးကို ရှောင်ပါ။
၃။ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို လေးစားပါ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက relationships မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပေမယ့် သင့်လက်တွဲဖော်က သူတို့အတွက် ဘယ်လိုမေးရမှန်း သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကို ရအောင်ကြိုးစားဖို့ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ အပြုအမှုအချို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သူတို့က နှုတ်ဆိတ်နေတဲ့နည်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ နာကျင်စရာ ဟာသတွေလုပ်ပစ်တာ (ဒါမှမဟုတ်) သူတို့နည်းလမ်းအတိုင်း မရတဲ့အခါ ကလေးတစ်ယောက်လို ဆောင့်အောင့်တာမျိုးတောင် လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအမူအကျင့်က မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စကားဝိုင်းတစ်ခု စတင်ပေးတာက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ ပိုရင့်ကျက်တဲ့ ထွက်ပေါက်အသစ်တစ်ခုကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
၄။ ဥပမာကောင်းတစ်ခု သတ်မှတ်ပါ
သင်လိုချင်တဲ့ ရင့်ကျက်သော လူကြီးဆက်ဆံရေးမျိုးအတွက် စံနမူနာကောင်းပြပါ။ သင်မြင်ချင်တဲ့ပုံစံကို ပြပါ။ သူတို့ကို အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာ ပိုကူညီစေချင်ရင် ကိုယ်ကလည်း အိမ်မှုကိစ္စတွေကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ယူတာ သေချာပါစေ။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကို ပြဿနာတွေနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ပြောစေချင်ရင် ငြင်းခုံနေချိန်မှာ ငြိမ်ငြိမ်နေလိုက်ပါ။ တစ်ခါတရံ စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက် သာယာလမ်းတဲ့လမ်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းတာက သူတို့ကို နောက်ဆုံးမှာ အဲဒီလိုပဲလုပ်ဖို့ အားပေးပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ခံရဖို့ ခွင့်ပြုခြင်းက အဖော်ရဲ့ ကလေးဆန်တဲ့အပြုအမှုကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ထူးဆန်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးဆန်တဲ့ပါတနာတစ်ယောက်ရှိရင် “လူကြီး”ဆန်တဲ့ ပါတနာတစ်ယောက်လည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီမကောင်းတဲ့ dynamic ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ဆိုရင် အပြန်အလှန်မှီခိုမှုကို ကျင့်သုံးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင်အပြန်အလှန်မှီခိုတဲ့အခါ သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးမှာ အမှီအခိုကင်းမှု(independence)က ဟန်ချက်ညီလာပြီး ကျန်းမာသော မှီခိုမှုအချို့လည်း ရှိလာပါမယ်။ အချင်းချင်း ကူညီလာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဂရုစိုက်မှုနဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ပြသလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က မိဘအခန်းကဏ္ဍမှာယူခဲ့ရရင် ကိုယ့်ကိုလည်း ဂရုစိုက်စေချင်ကြောင်း သင့်လက်တွဲဖော်ကို သတိပေးပါ။ သင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို မျှဝေပါ။ ဒီအရာက သူတို့ကို ကလေးဇာတ်ကောင်ကနေ စောင့်ရှောက်သူ ဇာတ်ကောင်သို့ ချက်ချင်း ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
၆။ သူတို့ကို အမှားလုပ်ခွင့်ပေးပါ
သင့်ကိုယ်သင် ရိုးသားပါ။ သင့်လက်တွဲဖော်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေမိသလား? သူတို့ကို အမှားလုပ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ဖို့ သင်ကြိုးစားနေမိသလား? သူတို့က ကလေးဆန်တဲ့အပြုအမှုနဲ့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ သူတို့ကို ကယ်တင်ဖို့က သင့်တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ အမှားလုပ်ခြင်းက ကလေးဆန်တဲ့သင့်လက်တွဲဖော်အတွက် သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါက သူတို့ရင့်ကျက်လာဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၇။ တသီးတသန့် အချိန်ဖြုန်းပါ
သူတို့ရဲ့ ကလေးဆန်တဲ့ အပြုအမှုက သင့်ကိုနာကျင်စေတယ်ဆိုရင်(သို့) သူတို့က သင့်ကို အထောက်အပံ့တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးနေရင် တစ်ခါတစ်လေမှာ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းက သင်ကိုယ်တိုင် unavailable (လိုအပ်ချိန်မှာ ရှိမနေပေးဖို့) ဖြစ်စေဖို့ပါပဲ။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ (ဒါမှမဟုတ်) တစ်ယောက်တည်းနေပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်တွေကို သုံးပြီး သူတို့လုပ်ရပ်တွေကို ပြန်သုံးသပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။
၈။ နယ်နိမိတ်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ပါ
Relationshipတိုင်းမှာ စည်းတွေ၊ ဘောင်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်တွဲဖော်က မရင့်ကျက်စွာ ပြုမှုနေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ သင်သည်းမခံနိုင်တဲ့အရာတွေ၊ နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်မှုအတွက် အကျိုးဆက်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြပါ။ ဥပမာ- သူတို့မှာ ဒေါသတကြီး ဝုန်းဒိုင်းကြဲတဲ့ တုံ့ပြန်မှုမျိုးရှိရင် အငြင်းပွားနေချိန်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ လေးစားမှုရှိမှသာ စကားပြောရလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ကို ပြောပြပါ။ သူတို့က အော်ဟစ်တာမျိုး (ဒါမှမဟုတ်)သင့်ကို နင်ပဲငဆပြောတာမျိုးဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ စကားဝိုင်းကို အဆုံးသတ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနယ်နိမိတ်တွေက သင့်ရဲ့ relationshipမှာ ကလေးဆန်တဲ့ အပြုအမှုတွေကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြစေပါတယ်။
၉။ အပြုအမှုကောင်းဆိုရင် တန်ဖိုးထားပေးပါ
သူတို့မှန်တာလုပ်တဲ့အခါ တန်ဖိုးထားကြောင်း ပြသပါ။ ဒဏ်ခတ်တာက သင့်ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အပြုသဘော အားပေးထောက်ခံခြင်းက ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က တာဝန်ယူတဲ့အခါ တန်ဖိုးထားကြောင်းပြပါ။ အတိတ်က အမှားတစ်ခုကို သူတို့ပြန်ပြင်ရင် သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါ။ အသိအမှတ်ပြုပေးခြင်းက သင့်လက်တွဲဖော်ဆီကနေ သင်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ရင့်ကျက်သော အပြုအမှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုစေပါတယ်။